Turkiga wax tartan ah kulama jiro dalalka Soomalia Caawiya – Banaadir Times
By banaadir 18th August 2018 179 No comment
Turkiga wax tartan ah kulama jiro dalalka ka howlgala Soomaaliya ee doonaya iney xasiliyan, sidaasi waxaa wakaalada wararka Turkish-ka ee Anadolu u shegay safiirka Soomaaliya u fadhiya Dowladda Turkiga Olgan Bekar.
“ Waligeen tartan lama gelin dalalka ka howlgala Soomaaliya, Turkiga wuxuu kasbaday jaceelka iyo kalsoonida shacabka Soomaalida tan iyo sanadii 2011-kii” ayuu yiri Safiirka, isagoo dafiray wararka sheegaya in tartan siyaasadeed uu kala dhaxeeyo wadamada qaar ee Soomaaliya u jooga taageerada Dowladda.
“ Turkiga waxaa sharaf u ah booska uu Soomaaliya ka taagan tahay ” wuxuuna intaa ku daray in ujeedka Turkiga uu yahay sidii loo caawin lahaa shacabka Soomaaliyeed, si dalka uu ugu soo kabsado dagaaladii sokeeye ee ka qarxay 1991-kii.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo dib ugu soo laabtay Muqdisho
Deg-Deg:-dagaal xoogan oo ka socda duleedka Kismaayo.
By banaadir 24th March 2020
Madaxweynaha Hir-Shabeelle oo shaaciyay dhibaato ka dhalatay fatahaadaha